म अझै उसैलाई पर्खिरहेको छु , आखिर कहिलेसम्म ? - StarPratika.com
म अझै उसैलाई पर्खिरहेको छु , आखिर कहिलेसम्म ?
मैले न कुनै प्रेम नै गरेको थिए न कुनै उसले प्रस्ताव नै गरेको थियो । न त हाम्रो प्रेम नै थियो न त ब्रेक अप नै । हाम्रो भेट भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नै चिनजान भएको हो । उसँग मेरा साधारण बोलचाल हुन थालेपछि मैले मनमा लागेको कुरा सबै सुनाए । आफु मनमा कुनै कुरा लुकाएर बस्न नसक्ने मान्छे थिए । मन लागेको कुरा फ्याङफुङ बोल्ने मान्छे जोसँग पनि बोलथे । ए दिन मैले त्यो ऊसँग पनि बोलेँ । तर ऊ यति नराम्रो छ कि उसको फोटो देखाउन पनि मन लाज लाग्छ तर उसको सान साउथ फिल्मको हिरोको भन्दा कम छैन ।
हाम्रो माया करिब दुई महिनासम्म राम्रै चलेको थियो त्यसपछि ऊसले मलाई इग्नोर गर्न थाल्यो र मैले किन इग्नोर गरेको भनी खोध्दा उसको अरु नै केटी साथी भएको थाहा पाएँ। मैले पहिले नै उसलाई सम्बन्धको बारे सोधेकी थिएँ तर उसले कसैसँग सम्बन्ध भएको कुरा गरेन । पछि हरु केटीबाटै थाहा भयो । अहिले हल्का बोलचाल मात्र हुन्छ पहिलेको जस्तो सम्बन्ध छैन । कहिले किन बोल्ने भन्ने लाग्छ तर मन भने मान्दैन। अनि उसले कुनै कुरामा इग्नोर गर्दा साह्रै मन दुख्छ । सुझाव दिनु न म ऊसँग बोलुँ कि ब्लक गरुँ ।
प्रकाशित मिति : 2020-04-27
गीतकार अम्बिका गुरुङको ‘यो आँखाको नानि’सार्बजनिक’ (भिडियो सहित)
सुबाश र रिचेलको अभिनयमा रहेको ‘अधुरो प्रेम कहानी’ सार्वजनिक ( भिडियो सहित )
सन्नी लियोन फिल्म निर्माता बन्दै, सलमान, आमिर र साहरुखलाई टक्कर दिने